May 2016 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 May 31, 2016 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee AL-FURQAAN, waxaa lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. Halkan Ka Dhageyso…
Warka Duhurnimo ee Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan waxaa lagu soo gudbiyay wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda. Dhagayso Warka Duhur 31 05 2016
Si aad u hesho dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, la soco wararka ka baxa idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan. Halkan ka dhagayso War Subax 31 05 2016
Dhageyso:Warbixin Ka Hadlaysa Bahdilaada Itoobiya Kula dhaqanto Dabo dhilifyada Ushaqeeya.
Hab dhaqanka Gumeystaha Lagu Yaqaano ayaa kamid ah in six un uu ubahdilo kuwa Camiilada u ah ee kagala shaqeeya damaca Gumeysigooda. Itoobiya waxa ay kamid tahay Gumeystaha afrikaanta kuwa ugu xun. Soomaalida iyo Itoobiya waxaa…
Dhageyso:Maxamed Cabdulle oo isku dhiibay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Wali waxaa Gobalka Gedo ka taagan Firxad Maleeshiyaadka Soomaalida ah ee la shaqeeya xabashida Itoobiya. Maxamed Cabdulle Cali oo kamid ahaa Ciidamada Ku sugan Baardheere ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaabul Mujaahidiin. waxa…
Diyaarahada dowladda Ruushka ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay oo Isniin ahayd waxay duqeymo xoogan oo Arxan darro ah ka geysteen magaalada Idlib oo ka baxsan gacanta Nidaamka, islamarkaana maamulaan kooxaha Jihaadiyiinta ee…
Axmad	 May 30, 2016 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. Halkan ka dhagayso…
Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa ku waramaya in dalkaas lagu dilay Ciidamo katirsan Qaramada Midoobay oo dalkaas ku duulay sanadkii 2013 iyagoo ku andocoonaya iney Nabad kusoo dabaalayaan dalkaas. Kolonyo katirsan Ciidamada…
Warka Duhurnimo ee Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan waxaa lagu soo gudbiyay wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda. Halkan ka dhagayso War Duhur 30 05 2016
Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in is rasaaseyn xoogan ay ka dhacday magaalada Houston ee gobolka Texas dalka Mareykanka, taas oo dhexamrtay Ciidamo katirsan Booliiska Mareykanka iyo rag hubeysan. Is rasaaseynta oo…